सुखी सोनु किन भन्छिन् आफैँलाई अभागी ? « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
सुखी सोनु किन भन्छिन् आफैँलाई अभागी ?
२३ असार २०७२, बुधबार ११:१९ मा प्रकाशित
राजन घिमिरे, काठमाडौँ । नाम र दाम जीवनको पर्याप्तता होइन न त पूर्ण सन्तुष्टि नै । पैसाले सुख मिल्छ तर खुसी मिल्दैन । आत्मसन्तुष्टि र सुखी जीवनका लागि आखिर माया नै ठूलो रहेछ । त्यसैले त भनिएको होला, ‘संसार मायामै अडिएको छ ।’ हो, यतिखेर निर्मात्री तथा अभिनेतृ सोनु थारूलाई यस्तै आभाष भइरहेको छ । त्यसैले त उनी भन्छिन्, ‘चाहेजस्तो भए फिल्मी क्षेत्र नै छाडिदिन्छु ।’ तर, फिल्मी क्षेत्र छाडेर के गर्ने ? कता जाने भन्नेचाहिँ उनीसँग प्रस्ट जवाफ छैन ।
सोनु थारू भाषा चलचित्रकी चर्चित अभिनेतृ तथा निर्मात्री हुन् । एक दशकभन्दा बढी समय उनले चलचित्र निर्माण र अभिनयमै बिताइसकेकी छिन् । तर, यतिले मात्र उनलाई पुगेको छैन । उनीसँग नाम पनि छ र दाम पनि कमाइरहेकी छिन् । वर्षैपिच्छे एउटा चलचित्र बनाउँछिन् । तैपनि उनलाई जीवनबाट सन्तुष्टि मिलेको छैन । सोनु भन्छिन्, ‘जीवनमा नाम र पैसाले मात्र नहुँदोरै’छ ।’ हुन त उनीसँग पाँच वर्षीया छोरी प्राञ्जेल भए पनि उनलाई यतिखेर एक्लो महसुस भइरहेको छ । ‘छोरी छे, साथ छैन’ उनी भन्छिन्, ‘खुसी हुनका लागि न्यानो माया पनि चाहिँदोरहेछ । अहिले मलाई यस्तै महसुस भइरहेका छ ।’ उनले अहिले आप्mना कमजोरी पनि ठम्याउन थालेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘चाँडो विश्वास गर्नु मेरो कमजोरी हो । जसले गर्दा म धेरै ठाउँमा फसेकी छु ।’
सोनुले चलचित्र निर्माणमा लागेर नाम मात्र कमाइनन्, आफ्नो समुदायको कला, संस्कृति र भेषभूषाको प्रवद्र्धन पनि गर्दै आएकी छिन् । जसबाट उनले नेपाली दर्शक र आफ्नो समुदायको सम्मान र माया पाइरहेकी छिन् । तर, उनलाई जुन पाउनुपर्ने मायाकै अभाव छ । सोनु भन्छिन्, ‘माया प्रेमका बारेमा म अभागी रै’छु ।’ हुन पनि उनको जीवनका दरारै–दरार छन्, आफ्नै चलचित्रजस्तो । प्रारम्भमै उनले थारू भाषा चलचित्र ‘दरार’ बनाएकी थिइन् । चलचित्रले राम्रै चर्चा पायो । तर, त्यसपछि सोनुको व्यक्तिगत जीवनमा दरारका रेसा कोरिन थाले । ती रेसाले अझै पनि उनलाई छोडेको छैन । त्यसैले बेला–बेला उनी दिक्क मान्छिन् र भन्छिन्, ‘जीवन सोचेजस्तो नहुँदोरै’छ । जीवनलाई परिपूरक बनाउन सङ्घर्ष नगरेकी पनि होइन । तर, कता–कता चिप्लिरहेकी छु ।’ सोनु आफ्नो जीवनमा दुईपटक चिप्लिएकी छन् अर्थात् उनले दुईजनासँग जीवन गाँसिन्, खुसी जीवन जिउने अभिलाषासहित । तर, त्यही खुसीको अभिलाषा उनलाई अहिले पीडा भएको छ । अहिले उनीसँग भएको खुसी भनेकै प्राञ्जली हुन् । सोनु भन्छिन्, ‘मेरो मुटु भनेकै छोरी हुन् । वैशाख १२ मा भूकम्प आउँदा छोरी काठमाडौंमा छाडेर सुटिङका लागि म दाङमा थिएँ । त्यसबेला छोरीलाई सम्झेर बेहोस नै भएँ ।’
०५८/५९ सालतिर कलाकारितामा करिअर सुरु गर्दा उनी जीवन सङ्घर्ष हो भन्थिन् । र, जतिसुकै सङ्घर्ष र मिहिनेत गर्न तयार रहेको सनाउँथिन् । उनले भनेजस्तै सङ्घर्ष पनि गर्दै आएकी छिन् । तर, पाँचौँ चलचित्र निर्माण गरिरहँदा भने उनले थाकेको महसुस गरेकी छिन् । सोनु केही दिनअघि मात्र चलचित्र ‘तुम मिल गिलो’को सुटिङ सकाएर दाङबाट राजधानी फर्केकी हुन् । ‘तुम मिल गिलो’ उनको होम प्रोडक्सन सोना फिल्म्सको पाँचौँ प्रस्तुति हो । यसै चलचित्रबारे अनौपचारिक कुराकानीमा सोनुले आफ्ना विगत र वर्तमानका पाटा सुनाएकी हुन् । यो चलचित्र निर्माण सक्न आफूलाई निकै हम्मे–हम्मे परेको दुःखेसो सोनुले सुनाउन भ्याइन् । ‘तुम मिल गिलो’को सुटिङ सक्न हम्मे पर्नुको मुख्य कारण त महाभूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर परकम्प नै हुन् । त्यसपछि एक्लो प्रयास । उनले भनिन्, ‘सुरुवाती दिनमा कलाकारितामा रमाइलो हुन्थ्यो । अहिले त व्यावसायिक बनाएकी छु । त्यसैले कठिन मोड आए पनि गरिरहेकी छु ।’
सोनु राजनीतिमा पनि चासो राख्छिन् । चलचित्र अभिनय र निर्माणसँगै उनी थरुहट तराई पार्टी नेपालको राजनीति गर्छिन् । सोनु यस पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका अलावा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख हुन् । तर, उनी राजनीतिले पनि पार नलाग्ने तर्क राख्छिन् । ‘राजनीति त देश, जनता र समुदायका लागि गर्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘जीवन चलाउन त व्यवसाय नै गर्नुपर्छ । त्यसैले भविष्यमा कुनै व्यवसाय गर्नेछु ।’ उनले चलचित्र निर्माणलाई पनि व्यापारकै रूपमा लिएकी छिन् ।
‘तुम मिल गिलो’को च्यारिटी दशैँमा राजधानीमा गर्ने सोनुको सोच छ । ‘अहिले सुटिङ मात्र सकेर राखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अब केही दिनमै सम्पादनमा लाग्नेछु । भरसक आगामी दशैँमा च्यारिटी गर्ने सोच छ ।’ यससँगै उनले अर्को प्रोजेक्ट पनि थाल्दै छिन् । उनले ‘मस्तौली’ अर्थात् मायालु निर्माण गर्ने बताएकी छिन् । जुन चलचित्र आफ्नै जीवन भोगाइमा केन्द्रित हुने उनले सुनाइन् ।